; कृ : समिक्षा - अनमोल दमदार , निर्देशन फितलो - reelnepal
नेपाली सिनेजगतको यस बर्षकै एउटा बहुप्रतिक्षित चलचित्र हो कृ। प्रदर्शन अगावै धेरैनै चर्चा परिचर्चा बटुल्न सफल यो फिल्मका केहि पक्षहरु अब्बल सावित भए भने कुनै पक्षहरु अत्यन्तै फितला हुन पुगे जसले गर्दा फिल्म समग्रमा औसत मात्र बन्न पुग्यो। 'कृ' एउटा प्रतिशोधको कथा हो। प्राय: यस्ता कथाहरुलाई न्यायपूर्ण ढंगले अन्त्य गर्न कठिनाईनै हुन्छ र पनि 'कृ' ले यस्ता कुराहरुलाई छिचोल्दै जान्छ तर आधारभूत कुराहरुमा रहेको कमजोरीका कारण पुरै चलचित्र भने उत्कृष्ट बन्न सक्दैन।
फिल्मको सुरुवात हुन्छ ब्रिटिश गोर्खाको सैनिक अभय मान सिंह ( अनमोल के. सी ) को नेपाल आगमन बाट। एउटा लाहुरे नेपाल आएर बाल्यकालमै छोडेको आफ्नो गाउँ र त्यहि गाउँमा रहेकी आफ्नो मायाको सम्झना गर्छ र त्यस्त तर्फ लाग्छ। गाउँमा पुग्दा पुग्दै भएको आफ्नो माया केशर ( अदिति बुढाथोकी ) संग उसको भेट त हुन्छ तर एक अर्कालाई उनीहरुले चिन्न भने सक्दैनन्। आफ्नो परिचयलाई लुकाएरै अभयले केशरका बुवा भूपाल मान सिंह ( सरोज खनाल ) संग चिनाजानी गर्छ र बेलुका उनिहरुकैमा वास बस्न पुग्छ। घरमै पुगी सकेर पनि अभयले आफ्नो परिचय भने खोल्दैन बरु सहि समय आए पछि मात्र सब कुरा भन्ने निर्णय गर्छ।
यस्तैमा कथा अगाडी बढिराखेको हुन्छ र एकदिन अभयले आफ्नो मनको कुरा केशरलाई भन्ने निधो गर्छ र उसको सामु पुग्छ तर परिस्थितिका कारण केशरले उसलाई आफूबाट टाढा गराउँछे र उ त्यहाँ बाट फर्कन बाध्य हुन्छ। पछिमात्र केशरले अभयले छोडेर गएको उनीहरुको मायाको चिनोबाट थाहा पाउँछे कि उसले कुरी राखेको काजी वा लाहुरे उहीनै हो भनेर। फर्की सकेको अभयलाई भेट्न केशर शहरतर्फ लाग्छे। उनीहरुको भेट पनि हुन्छ र त्यहि समयमा कथाले अप्रत्याशित मोड लिन्छ र केशर अपहरणमा पर्छे। त्यसपछि के कस्तो परिस्थितिमा अभयले आफ्नो मायालाई भेटाउन सक्छ वा सक्दैन र केशरका अपहरणकारी हरुसंग कसरि बदला लिन्छ भन्ने सन्दर्भमा फिल्मको कथा अगाडी बढ्छ।
एउटा फिल्मलाई सन्तुलित रूपमा राम्रो बनाउनका लागि त्यसका सम्पूर्ण पक्षहरु सबल हुनु पर्छ। 'कृ' मा भने कुनै पक्षहरु अब्बल देखिए त कुनै पक्षहरु कमजोर। राम्रा पक्षका कुरा गर्दा अनमोलको नाम सबै भन्दा अगाडी लिनु पर्ने हुन्छ। जुन किसिमका चरित्रहरू अनमोलले अगाडिका फिल्महरुमा गर्दै आएका थिए त्यो भन्दा एकदमै फरक रूपमा हामि यस चलचित्रमा उनलाई पाउन सक्छौं। एउटा कलाकारले एउटा चरित्रका लागि यति धेरै परिवर्तन हुन सक्नु त्यो आफैमा उदाहरणिय छ र त्यो मिहिनेत पर्दामा पनि छर्लङ्ग देखिएको छ। प्रदर्शन अगाडिको ट्रेलर हेर्दा अनमोलको अभिनय क्षमता माथि केहि सन्देह भए पनि फिल्ममा उनले निखारका साथ गरेको काम प्रशंसनीय छ। त्यस्तै अनुप बिक्रम शाहीले पनि आफ्नो कामलाई राम्रो ढंगले पुरा गरेका छन्। उनलाई दिइएको चरित्रमा उनको अभिनय एकदमै सुहाउँदो र विश्वसनीय छ। अरु कलाकारहरुको सन्दर्भमा सरोज खनाल, लक्ष्मी गिरि, कामेश्वर चौराशिया सबैले आ-आफ्नो भूमिकामा राम्रै काम गरेको पाउन सकिन्छ।
त्यस्तै अर्को सबल पक्षका रूपमा कृको द्वन्दलाई लिन सकिन्छ। चन्द्र पन्तले कोरियोग्राफ गरेका कृका द्वन्द दृश्यहरु उत्कृष्ट छन्। नेपाली सिनेमाको सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा नौला प्रयोगहरु पनि भएका छन्। यसैगरी चलचित्रका प्राविधिक पक्षहरु पनि राम्रै छन्। पुरुषोत्त प्रधानको छायांकन सदाजस्तो राम्रो छ। फिल्ममा प्रशस्त लगानी भएको छ जुन पर्दामा सजिलै देखन सकिन्छ। समग्रमा भन्नु पर्दा प्राविधिक रूपमा कृ एउटा गुणस्तरिय चलचित्र बनेको छ।
अरु सबै कलाकारहरुको तुलनामा अदिति बुढाथोकीको अभिनय अलि कमजोर रहेको छ। एउटा गाउँले कतिको भूमिकामा उनलाई विश्वसनीय रूपमा प्रस्तूत गर्न नसक्नु निर्देशककै कमजोरी पनि हो। तर पनि यस कुराले फिल्मलाई नै खल्लो बनाउने गरि दखल दिएको भने होइन।
संगीत पक्षको कुरा गर्दा 'यति यति पानि' ले दर्शकहरु माझ राम्रो छाप बनाएपनि अरु गीतहरु भने खासै सान्दर्भिक पनि छैनन् र राम्रा पनि छैनन्। नेपाली चलचित्रलाइ सफल बनाउन गीत संगीतको ठुलो भूमिका रहन्छ तर कृ युनिटले यो कुरामा खासै वास्ता गरेको देखिदैंन। समग्रमा भन्नु पर्दा लगानीका हिसाबले चलचित्रको संगीत धेरै पछाडी रहेको छ।
कथाका आधारमा पटकथा / संवाद निर्माण गर्न नसकेको हो वा निर्देशकले पटकथालाई पर्दामा उतार्न नसकेको हो, जे भएपनि निर्देशक र लेखन युनिट यो कुरामा चुकेका छन्। फिल्मको आधारभूत पक्ष मानिएका कथा / पटकथा / संवाद / निर्देशन यसै हिसाबले अतिनै फितलो महसूस हुन्छ। समयक्रमका आधारमा लगातार प्रवाह भईरहेको कथालाई निर्देशकले कुन सोचले टुक्राएर अगाडी पछाडी गरेर देखाउन खोजेका हुन् त्यो त्यति सान्दर्भिक देखिदैन। बरु दर्शकहरुलाई कथा प्रवाह बुझ्न अल्मल्याउंछ। विदेशी चलचित्रहरुमा प्रशस्त देखिने यस्ता प्रयोग यस चलचित्रको सन्दर्भमा जबरजस्ती छिराईएको जस्तो पाईयो।
अन्त्यमा, नेपालि सिने क्षेत्रका लागि यस्ता फिल्महरुको निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो। फिल्मले प्रदर्शन अगावै बटुलेको चर्चा तारिफ योग्य छ। यसले नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन सहयोग पनि गर्छ। तर पनि जति चर्चामा फिल्म पुग्यो, त्यस अनुरुप दर्शकहरुको बढेको अपेक्षा पुरा गर्न फिल्मले नसकेपनि फिल्म औसत बनेको छ। एकपटक भने यो फिल्म आरामले हेर्न सकिने बनेको छ।
पटकथा / संवाद : १.५ / ५
संगीत : २ / ५
निर्देशन : १ / ५
द्वन्द : ३ / ५
अभिनय : २. ५ / ५
** फिल्मको रेटिङ्ग माथिका रेटिङ्घरुको औसत रेटिङ्ग चाही होइन।
रेटिङ्ग : २.५ / ५
TAGS : Kri , Anmol K.C. , Aditi Budhathoki , Saroj Khanal , Laxmi Giri , Rupa Rana , Kameshwor Chaurasia ,
Dir: Kalyan Adhikari
Gauri Malla, Rajesh Dhungana, Binod Neupane and others